बोइङले केन्द्रीय कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने, व्यावसायिक प्रतिष्ठामा आँच आउने विज्ञको ठहर
काठमाण्डौ । बोइङले अमेरिकाको सिकागोमा रहेको आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय वासिङ्टन डीसीको एर्लिङटनमा स्थानान्तरण गर्ने भएको छ। केही विश्लेषकहरुले भने कम्पनीको यस निर्णयलाई गलत कदमको संज्ञा दिएका छन्। बोइङ सन् १९१६ देखि २००१ सम्म अमेरिकाको पश्चिमी तटमा अवस्थित सियाटलमा रहेको थियो। चर्चाको शिखरमा रहेका बेला बोइङ सुरक्षित विमान...
बिग्रिँदो आर्थिक अवस्थालाई सम्हाल्न नसकेपछि श्रीलंकाका प्रधानमन्त्रीले दिए राजीनामा
काठमाण्डौ । श्रीलंकामा सरकारविरुद्ध चर्को विरोध भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेले राजीनामा दिएका छन्। उनले राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षेलाई राजीनामा पठाएका छन्। श्रीलंकामा चरम आर्थिक संकटको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका जनताहरुले राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे र उनको मन्त्रीमण्डललाई राजीनामा दिन दबाब दिइरहेका...
बिटक्वाइनको मूल्य जनवरीपछिकै न्यून विन्दुमा
काठमाण्डौ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकप्रिय डिजिटल मुद्रा बिटक्वाइनको मूल्य गत जनवरीपछिकै न्यून विन्दुमा पुगेको छ। अमेरिकी सेयर बजारमा गिरावट आएसँगै बिटक्वाइनको मूल्यमा आज ३ प्रतिशतले घट्दै ३३५९४.५० अमेरिकी डलरमा झरेको छ। सन् २०२१ नोभेम्बरमा ६८९९०.९० अमेरिकी डलर रहेको बिटक्वाइनको मूल्य ५० प्रतिशतले घटेर ३३५९४.५० डलरमा सीमित भएको...
रुसलाई ठूलो झट्का दिने तयारीमा जी–७ राष्ट्र, तेल र ग्यास आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने
काठमाण्डौ । युक्रेनमा आक्रमण गरेको भन्दै रुसले पश्चिमी मुलुकबाट प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको छ। अब अमेरिकाले जी–७ राष्ट्रहरु चरणबद्ध रुपमा रुसी तेल आयात घटाउन वा प्रतिबन्ध गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। बाइडेन प्रशासनले एक विज्ञप्ति जारी गरी यसले रसियाको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो हिस्सामा असर गर्ने जनाएको छ। जसका कारण रुसले...
एलन मस्कले ट्विटरमा लेखे–‘यदि मेरो रहस्यमय परिस्थितिमा मृत्यु भयो भने...’
काठमाण्डौ । विश्वकै धनीव्यक्ति एवं टेस्लाका सीईओ एलन मस्कको भर्खरैको एउटा ट्विट निकै चर्चाको विषय बनेको छ। आज बिहान मस्कले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘यदि मेरो रहस्यमय परिस्थितिमा मृत्यु भयो भने म भन्न चाहन्छु कि म तपाइँहरु सबैलाई चिन्न पाउँदै निकै खुसी छु।’ यो ट्विटअघि मस्कले एउटा पोस्ट सेयर गरेका थिए। जुन एउटा बयानको स्क्रिनसटजस्तो...
ग्यासको भाउ भारतमा ८ वर्षमा दोब्बर बढीले बढ्यो
काठमाण्डौ। छिमेकी मुलुक भारतमा पछिल्लो ८ वर्षमा ग्यासको भाउ दोब्बरले बढेको छ। भारतमा पछिल्लो ८ वर्षको अवधिमा घरेलु ग्यास प्रतिसिलेन्डर(१४.२ किलोग्राम)को मूल्य दोब्बरले वृद्धि हुँदै ९९९.५० भारु पुगेको हो। सन् २०१४ मार्च १ मा घरेलु ग्यासको(१४.२ किलोग्राम) मूल्य प्रतिसिलिन्डर ४१०.५ भारु थियो। हाल दिल्लीमा प्रतिसिलिन्डर ग्यास...
चीनमा बिक्री घट्दा एडिडासको नाफामा ३८%को गिरावट
काठमाण्डौ । जर्मन स्पोर्ट्सवेयर कम्पनी एडिडासको मुनाफा ३८ प्रतिशतले घटेको छ। कम्पनीले जारी गरेको रिपोर्टका अनुसार आर्थिक सन् २०२२ को पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको मुनाफा ३२७ मिलियन डलरमा खुम्चिएको छ। जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३८ प्रतिशतले कम हो। चीनमा सिर्जना भएको चुनौतीपूर्ण बजार अवस्थाका कारण कम्पनीको मुनाफामा...
ट्विटरको आम्दानी २०२८ सम्म २६.४ अर्ब डलर पुर्याउने एलन मस्कको लक्ष्य
काठमाण्डौ । एलन मस्कले सन् २०२८ सम्ममा ट्विटरको आम्दानी २६.४ अर्ब डलर पुर्याउने बताएका छन्। लगानीकर्तासँग अन्तर्क्रिया गर्दै मस्कले यस्तो बताएका हुन्। कम्पनीको आम्दानी बढाउनका लागि ट्विटरलाई सब्सक्रिप्सन मोडमा लाने योजना रहेको मस्कले बताएका छन्। मस्कले हालै ट्विटरलाई ४४ बिलियन डलरमा खरिद गरेका थिए। ट्विटरले गत वर्ष ५ अर्ब डलर...
यसकारण अमेरिकी र एसियाली सेयर बजारमा गिरावट
काठमाण्डौ । अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले ब्याजदर वृद्धि गरेसँगै अमेरिकी र एसियाली सेयर बजारमा गिरावट आएको छ। महँगी नियन्त्रण गर्न फेडरल रिजर्भले चालेका कदमहरुले आर्थिक वृद्धिलाई प्रभाव पार्न सक्ने भयका कारण बिक्रीचाप पर्दा एसियाली र अमेरिकी सेयर बजारमा गिरावट आएको हो। शुक्रबार हङकङ र चीनको सेयर बजारमा गिरावट आएको छ। हङकङको...
रेपो दर बढाउने निर्णयले भारतीय सेयर बजारमा पहिरो, सेन्सेक्समा १३०७ अंकको गिरावट
काठमाण्डौ। रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)ले बुधबार अचानक रिपो दर ४० आधार विन्दुले बढाउने निर्णय गरेपछि भारतीय सेयर बजारमा भारी अंकको गिरावट आएको छ। रिपो दर बढाउने निर्णयले बीएसईको सेन्सेक्स १३०७ अंकले घटेको छ भने एनएसई परिसूचक निफ्टीमा ३९१ अंकको गिरावट आएको छ। समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार सेन्सेक्स २.२९ प्रतिशतले घटेर ५५६६९ र...
ट्विटर किनेपछि एलन मस्कले गरे यस्तो महत्वपूर्ण घोषणा
काठमाण्डौ । अहिलेसम्म मानिसहरुले ट्विटर प्रयोग गर्न कुनै प्रकारको पैसा तिर्नुपर्दैन। तर, भविष्यमा ट्विटरका लागि पैसा तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। यो जानकारी माइक्रोब्लगिङ साइट ट्विटर किनेका एलन मस्कले आफैँ दिएका हुन्। उनले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘ट्विटर सधैँ सामान्य प्रयोगकर्ताका लागि निःशुल्क हुनेछ तर व्यावसायिक तथा सरकारी प्रयोगका...
अमेरिकी सेयर बजारको आठ दशकयताकै खराब सुरुआत, के यो मन्दीको संकेत हो ?
काठमाण्डौ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिका यतिबेला समस्यामा देखिएको छ। महँगी ४० वर्षकै उच्च विन्दुमा छ। सेयर बजारको अवस्था बिग्रिएको छ। पहिलो त्रैमासमा जीडीपीमा गिरावट आएको छ र ब्याजदर पनि निरन्तर वृद्धि भइहरहेको छ। अर्थशास्त्रीहरुले अमेरिका आर्थिक मन्दीतर्फ धेकेलिँदै गएको बताएका छन्। अमेरिकी सेयर बजार एस एन्ड पी...
अस्ट्रेलियामा ११ वर्षपछि ब्याजदर बढ्यो, घरेलु बजेट प्रभावित हुने अनुमान
काठमाण्डौ । अस्ट्रेलियामा ११ वर्षपछि ब्याजदर वृद्धि गरिएको छ। अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंक ‘रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलिया (आरबीए)’ले ११ वर्षपछि ब्याजदर वृद्धि गरेको हो। देशमा बढ्दो मुद्रास्फीतिको समस्यासँग जुध्न आरबीएले ब्याजदर ०.३५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो। अहिले अस्ट्रेलियामा मुद्रास्फीति दर २१ वर्षकै उच्च विन्दुमा पुगेको...
‘कौडीको भाउमा पनि नकिन्नु बिटक्वाइन’, वारेन बफेटले किन यसो भने ?
काठमाण्डौ । दिग्गज लगानीकर्ता वारेन बफेट बिटक्वाइनसहित सबै क्रिप्टोकरन्सी मन नपराउन व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन्। उनले बारम्बार क्रिप्टोकरेन्सीमा विश्वास नरहेको दोहोर्याउँदै आएका छन्। बफेटले फेरि एकपटक क्रिप्टोकरेन्सीमा आफ्नो राय दोहोर्याएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘तिनीहरु उत्पादक सम्पत्ति होइनन्। कौडीको भाउमा पनि म बिटक्वाइन...